သစ္စာအလင်း: ဘယ်အရာက မှ မနိုင်စေရ
‎ ဘဝမှာပတ်သက်လာတဲ့ အရာရာ ကို လုပ်သင့်တာမို့ အခြေအနေပေးတုံး မှာ အစွမ်းကုန်အားထည့်လုပ်ကိုင်ပြီးရင် ပြန်လည်မျှော်လင့်ရမဲ့ ရလဒ်ကို မေ့ထားတတ် ပါတယ်..။ အစွမ်းကုန်ကြီုးစား စာကျက် ထားလို့ စာမေးပွဲ ဖြေပြီး ချိန်မှာ အမှတ်တွက် ကာပူလောင် မနေတော့ပါ ။ ဒါကတော့ ကျွန်မ ရဲ့ ဘဝပေးအခြေအနေက လေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့ အလေ့အထ တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
မမျှော်လင့်တတ်တဲ့ နှလုံးသား ကိုထုဆစ်ပုံဖေါ် ထားရင် ခံစားရတာသက်သာတယ်ဆိုတာလည်း သိလာပါတယ်…။
လောက ဆိုတာကလည်း ကိုယ်မျှော်လင့်သလို ဖြစ်လာတယ် ဆိုတာ အရှားသားမဟုတ်ပါလား။
မမျှော်လင့် တဲ့အရာ တွေကလည်း တစ်ခါတစ်ခါ မမျှော်လင့်တဲ့အချိန်မှာ အဖေါ်အပေါင်း နဲ့ အုံဖွဲ့ နှိပ်စက်တတ်ပြန်သေး တာမို့ ခွန်အားသတ္တိ တို့ ဖြင့် ရင်ဆိုင် ရဲတဲ့သတ္တိ ကို လေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ရင်း ဘဝကိုဖြတ်သန်းလွန်မြောက်ရပါတယ်..။
ဖြစ်ချင်နေတာရယ်..ဖြစ်နေတာရယ် တစ်ထပ်တည်းမကျလေတိုင်း ဖြစ်ချင်စိတ်အားကြီးသူတို့၏ ထုံးစံအပူဓာတ်များထွက်လာတတ်တာ ခံစားဘူးကြပါလိမ့်မယ်..။
အားမလိုအားမရ ဖြစ်ကာ Why me! ငါ့ကျမှ ဖြစ်ရလေခြင်း ….ကံဆိုးလေခြင်း ၊
ဆိုတဲ့ ခံစားချက် အဆောက်အအုံ..အုံဖွဲ့ ရင်ထဲမှာကြွတက်လာ ကာ နှုတ်က ပွင့်အံထွက်တတ်ပါသေးတယ်..။ ဒါသည်ပင် အကုသိုလ် ဆိုတာ အရင်တုံးကတော့ နားမလည်။ စိတ်စွမ်းအား က တက်မလာ ပိုလို့ပင် ကျဆင်းတတ်တာ မျိုးပါ။
ဒီလို အခါမျိုး မှာ ကျွန်မတို့ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဘာသာပြန်ခဲ့တဲ့ ကဗျာ ဆရာ William Ernest Henley ရဲ့ Invictus ဆိုတဲ့ကဗျာလေးကို ရွတ်ဆို မာန်တင်းမိပါတယ်။
Invictus ဆိုတဲ့စကားလုံး က လက်တင်ဘာသာမှာ ပဲ ရှိပါတယ်.. အင်္ဂလိပ်လို ဘာသာပြန်ရင်တော့ "Unconquered" လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ကတော့ * အနိုင်မခံ * လို့ နာမည် လေးပေးခဲ့ပါတယ်။
*My head is bloody, but unbowed.
ငါ၏ ဦးခေါင်းသည် သွေးသံတို့ဖြင့် ရဲရဲနီ၏ ညွတ်ကား မညွတ်။*
ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေးတွေကိုတော့ ဗိုလ်ချုပ်က ပဲခူးဆောင်က အခန်းကသူ့ကုတင်ခေါင်းရင်းမှာ ရေးထိုး မှတ်သားထားတယ်လို့ကျွန်မ ကြားဘူးပါတယ်..။
ဒီကဗျာလေးထဲမှာ ..သွေးသံရဲတယ် ဆိုတာ ပါပေမဲ့ သွေးသံရဲစေတဲ့ ပုဂ္စိုလ် တစ်ဦးဦးကိုတော့ အပြစ်တင် နာကျည်းစကား မဆိုထားပါ။ တနည်းအားဖြင့် စာ တစ်စောင်ပေတစ်ဖွဲ့ ဖွဲ့ နွဲ့ စရာ အကြောင်းမရှိသလို ကိုတုံ့ပြန်ထားတဲ့စတိုင်ကို ကျွန်မပိုမိုနှစ်သက်မိပါသေးတယ်။
ပုဂ္စိုလ် သတ္တဝါ ညွှန်းဆို ဖွဲ့ နွဲ့စရာမပါတဲ့ သဘောတရား သက်သက် *လောကဓံ* ရယ် လို့သာ ဆိုထားပါတယ်..။ စိတ်နေမြင့်မား သဘောထားကြီးမားပါပေစွ..။
William Ernest Henley (1849-1903), the author of "Invictus"
ဒီကဗျာလေးကတစ်ဆင့် ကဗျာ ဆရာ ရဲ့နှလုံးသားကိုတိုက်ရိုက်တွေ့မြင်ရသလိုပါပဲ..သူ့ဘဝကိုလည်း ကျွန်မ က စိတ်ဝင်စားမိပါတယ်။
ကဗျာဆရာ Henley ဟာ တကယ်တော့ ၁၂ နှစ်သားကတည်းက အရိုးတီဘီ ရောဂါကိုခံစားခဲ့ ရရှာပါတယ်။
ငယ်ရွယ် တက်ကြွ တဲ့ ကျောင်းသား ဘဝမှာ ရောဂါဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လည်း Oxford တက္ကသိုလ် က ပြုလုပ်တဲ့ စာမေးပွဲ ကို အဆင့်မြင့်မြင့် အောင်မြင်အောင် ဖြေဆိုနိုင်ခဲ့ပါသေး တယ်။
ရောဂါ ဖြစ်လာတော့လည်း သက်သာမလာတော့ အသက်ရှင်ရပ်တည်ဘို့ အတွက် သူ့ရဲ့ အဘိုးတန် ခြေတစ်ဘက်နဲ့ လဲလှယ် ခဲ့ရပါတယ်..။
ဒီကဗျာလေးကို သူက ဆေးရုံပေါ်တက်နေရင်းနဲ့ ရေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးရုံ ကဆင်းလာတော့လည်း မသန်မစွမ်း ဒုက္ခသည် ဘဝ မှာ စိတ်ဓာတ်မကျပဲ အနှစ်၃၀ လုံး တက်တက်ကြွ ကြွ နေထိုင်သွားခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ဘဝကို စာနာတတ်သော စိတ်အစဉ် ဖြင့် စာလုံးများကို တိတိကျကျ ခံစားပုံဖေါ်ကြည့်မိပါတယ်..။
လောကဓံတရားတို့၏ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော လက်ခုပ်တွင်းသိုပင်
ကံတရား၏ ရိုက်ပုတ်ခြင်း ဒဏ်ချက်တို့ကြောင့်
ငါ၏ ဦးခေါင်းသည် သွေးသံတို့ဖြင့် ရဲရဲနီ၏ ညွတ်ကား မညွတ်။
ငါသာလျှင် ငါ့စိတ်၏ အကြီးအကဲဖြစ်သတည်း။ ။
တကယ်တော့လည်း လမ်းလျှောက်နေရတဲ့သူ တစ်ယောက်က ကားမစီး နိုင်လေခြင်း လို့ ဝမ်းနည်းသိမ်ငယ်နေမှု နဲ့ အချိန်ကုန် နေတတ် တာများတတ်ပါတယ်။
လမ်းလျှောက်နိုင်သေးတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ကျန်းမာရေး၊ လှမ်းနိုင်သေးတဲ့ခြေချောင်းများ ရဲ့ စွမ်းအင်သတ္တိ ကို သတိတရ တန်ဘိုးထား တတ် တွေးတတ်တယ်ဆိုတာ ရှားလှပါတယ်။ ဒါဆို ရင် အပူ မဖြစ်ပဲ အအေး ဓာတ်ကိုဆောင်နိုင်မှာ အမှန်ပါ။
*ငါ၏ အသည်းနှလုံးတို့သည် အသည်းခွဲသူတို့ ၏ ဒါးဒဏ်ရာဖြင့် ရဲရဲနီနေအံ့..သို့သော် မေတ္တာမပျက်..*
*ငါ၏ အိပ်မက်တို့သည် သင်၏ ရက်စက်လှသော ထုချေမှု ဖြင့် .မှုန့်မှုန့်ညက်ညက် ကြေ အံ့..သို့သော်.. အားမလျှော့*
စသည်..စသည်..ရွတ်ဆိုလိုသူများလည်း ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်..။ ရှိခဲ့ရင်လည်း ဒီကဗျာ နဲ့ အားတက်နိုင်ကြပါစေ..။
ကျွန်မကတော့ စိတ်အစဉ်ကို နာနာလျှော်ဖွတ် ပြီး ၁၅၀၀ သော ကိလေသာတရား တို့ အနိုင်မယူနိုင်အောင် …
ငါ ဖြင့်မခံစားပဲ လွတ်မြောက်နိုင်အောင် ကြိုးစားရပါအုံးမည်..။ငါးပါးမာရ်ညွန့်.. ရန်အဝံ့ ကိုမရွံ့ မထိတ်ခြင်္သေ့စိတ်ဖြင့် အော်..အနိုင်မခံ…ကြံဆောင် သင့်လှပါတကား။
မှတ်ချက် - ဒီစာစုလေးရေးသားဖြစ်အောင် ကဗျာကောင်းလေးများ မျှဝေ ဆွေးနွေး လေ့ရှိတဲ့ တူမောင်- ဒေါက်တာစိုင်းနိုင် ကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 3:58 PM